Kuchaneka njani ukuba uqhelanise kwisayithi kunye namadoda?
Ngaphandle kwefestile sele sele inkulungwane ye-21, eyayizisa inkqubela phambili kwinto yonke. Kwaye ukufezekiswa komntu ongcono kunokuba kungabonakali, waba ngumlawuli wehlabathi kule Internet. Nguye oye wanciphisa umgama phakathi kwabantu kwaye akazange ancedise intliziyo enye enesizungu ukufumana umphefumlo wakhe. Apha, abaninzi bafumene uthando kunye nobuhlobo babo, kodwa ngubani ongayifumananga - ngokuqinisekileyo uya kufumana ngokungena kwihlabathi elinobuchule lokunxibelelana.
Ngamnye wethu uphuthuma ekhaya ukuze anamathele kwi-esweni kwithemba lokusasaza le okanye loo mntu. Ngoko ke intombazana eqhelekileyo inqume ukuzama inhlanhla kwiindawo zasendle zewebhu. Namhlanje iikhompyutheni umhlobo nomcebisi wakho, kwaye wena, nokuba yintoni eyiyo, uzimisele ukwenza ulwazi olutsha. Ngaba uyazi ngokwenene ukuba uzazi kakuhle njani abafana kwisayithi?
I-intanethi kwiintsuku zethu nje "ibilisa" kubuninzi beendawo ezihlukeneyo ezilungiselelwe ukuba abantu bazi ntoni, kokubili ubuhlobo kunye nothando. I-website ye-dating iyona uncedisayo xa ufuna umntu. Ukuba uthelekisa kunye nezinye iindawo zokuziqhelanisa, umzekelo, i-cafe, iqela, isitalato, ngoko kungenakucaca ngokucacileyo ukuba izingosi zokuthandana zinika ithuba elifanelekileyo kwaye ngelo xesha azinakunyanzelanga nantoni na. Yaye ngokwenene inika umva wokukhanya kwaye ikuvumela ukuba uzive ukhululekile, kungekhona ngokukhawuleza, ukuba ukwazi omnye, ngokusemandleni akho. Yintoni eya kunceda kwixesha elizayo yenze nayiphina imifanekiso yomzwelo yomntu obhalisile naye ixesha elithile. Kwaye ke ukuziqhelanisa, okoqobo kunye nokuqala. Kuchaneka njani ukuba uqhelane nesayithi kunye namadoda? Impendulo ilula njengoko ezimbini kunye ezimbini kwaye ziqukethe igama elilula-ngesibindi. Ewe kunjalo, ungacingi ukuba awuyi kuphumelela. Uvele ubeke umgomo: kutheni ungazami. Ngoko masenze. Ezi ziza kunika amathuba amakhulu, into ephambili kukuba ukwazi ukubonisa wena kunye nomdla umdla wakho. Kwaye ukwesaba ukwazi into entsha kuya kukuvumela ukuba uzibonakalise ngokuzeleyo. Amantombazana abathanda amantombazana asebenzayo, avuyayo, anesibindi nabanamhlanje angabonisa zonke iimpawu zabo ezilungileyo naphi na, nokuba zikhona okanye ziyinyani.
Isinyathelo sokuqala sokumazi umntu kwisayithi siya kuba yintetho yencoko yakho. Ngaphambi koku, kubalulekile ukufundisisa ulwazi lomntu lomntu: iimfuno zakhe, izinto ezithandwayo, izakhiwo zokuzonwabisa, into ayithandayo umculo, iifilimu, iincwadi. Nika ingqalelo ekhethekileyo kwicandelo apho umfana ebhala ngaye kunye nalowo ufuna ukufumana. Ngokuqhelekileyo kukho ulwazi oluninzi oluncedo oluququzelela loo mbandela. Ngaphambi kokuba uthathe isinyathelo sokuqala, funda yonke into ngokucophelela, kwaye uzama ukulungelelanisa nalo mntu. Kwakhona, kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba ukugqitywa ngokugqithisiweyo kwimibuzo, kwinqanaba lakho, kuya kuchaphazela nekhosi yeziganeko. Ngoko, njengoko kuya kuba mnandi kuye ukuba afunde ulwazi oluphambili malunga nawe kwidatha yakho eyabhala. Zonke ezi ngasentla ziba sisihloko esihle sokunxibelelana.
Kwaye ke, sibhala umyalezo wokuqala. Ngokuqhelekileyo, oku kufuneka kube ngumyalezo osisigxina ngesinye ixesha nokuba unemibuzo. Yaye khumbula, umdla umbuzo wokuqala, ukuba mhlawumbi baya kuphendula. Kufuneka kubekho into embizweni oya kumdla kumntu kwaye kukubangela ukuba unomdla ongenakunxilongo. Ukuba oku kungenzeki, umyalezo uya kubhalwa ngaphandle. Unokwenza ukuncoma. Kodwa ezi ntetho-izifanekiso, ezifana "Sawubona, upholile", "I-avatar avatar", kungcono ukuba ungasebenzisi. La magama awayi kubangela impendulo efunekayo, kuba behlala kwindawo yokuqala ekusebenziseni kwabo kwinethwekhi kwaye sele bekhatywe ngumntu wonke. Enye into efanelekileyo kukuhlwayela intlanzi. Umzekelo, ubhala "Unokuqiqa umgqweno wam?", Uze ubonise ingcamango yakho okanye uye kwi-Intanethi efanayo. Ingqondo yokuhleka kweyona ndlela yindlela efanelekileyo yokuthakazelisa umfana. Kwakhona akunakulimaza ukubonisa ukuba ungubani umntu osebenzayo, nditsho nje ukuba ungonwaba kangakanani na abahlobo bakho. Kwaye ke, ukuba umfana unomdla kuwe, uya kukubonisa kwaye akulethe kwizinto ezibizwa ngokuba "zidibanisa". Apha unokuzibuza ngesibindi ngenombolo yakhe yefowuni, ngaphandle kokuba ayizange ifike phambi kwakho kule nto. Ngaba uyazi ukuba inombolo iya kucela ntoni? Uze ubuze ukuba njani. Okanye ungabhala into efana: indawo, amachaphazi kwaye uyongeze onke ngamazwi-apha ndikucela ukuba ushiye inombolo yefowuni yakho ... ". Nangu kuwe umcuke nombuzo omkhulu. Emva kokuba ebhale inombolo yakhe, qwalasela ukuba unamakhadi ezandleni kunye nawaphi na amakhadi eempondo. Ukuba konke okufanayo awufuni ukunika inombolo yakho, qhubeka noonxibelelwano oluqhelekileyo okanye unokwenza unxibelelwano nge-webcam okanye nge-Skype. Into eyona nto kukubeka iinjongo, yiyiphi na into oyifunayo kule ndawo-oqhelekileyo unxibelelwano kwintanethi okanye udibana ngaphandle kwayo. Ndicinga ukuba ngaphambi kokuba udibane nalo mfana, uya kuqonda ngokucacileyo ukuba ungubani kunye nendlela yokuziphatha xa udibana, ukuba uthethe ntoni, apho uya khona. Emva kokuthetha nge-intanethi, unakho, kunye nobomi, ufunde umhlaba wangaphakathi lomntu, iinkolelo zakhe kunye nombono wobomi.
Ngoko, ukuba ipiramidi yokwakha intando nge-Intanethi ilula kakhulu. Into ephambili kukuba ukwazi ukuzityhila ngokwaloo ndlela ushiye imbonakalo emihle kuwe. Ngendlela, kula masayithi abafana baninzi ngaphezu kwamantombazana ngoko ukhetho lwakho luphindwe kabini. Kwaye ukuba le ndawo ingenxa yokuthandana, ngoko ke into ekucingayo, ayizange isebenze kunye-bhalela kwenye. Apha, uThixo ngokwakhe uyalela ukuba ndikhethe. Yaye khangela, kungekudala okanye kamva uya kufumana oya kukunika ulwandle lwamava kunye namava amnandi. Ngendlela, khumbula ukuba unomthandi umntu nangomso wekhompyutha yakho. Le nto ihlala iqhutywe yinto yokuba ngamanye amaxesha siyalibala malunga nomda phakathi koqobo kunye nokwenene. Kubaninzi bethu, unxibelelwano olungqinileyo (ingxoxo, i-ICQ, iifom, intanethi) yinxalenye yobomi bemihla ngemihla. Abahlobo kwintanethi banokulinganiswa ngokulula kunye nabahlobo okanye babenze uvelwano, nokuba ngaba uyazi kuphela kwiifoto. Kodwa ukuba uyazi indlela yokuziqonda ngokuchanekileyo nabafana kwisayithi, i-intanethi ayiyi kuba ngumthombo wabahlobo abatsha kunye nabaziyo, kodwa nendlela yokufumana uthando lwakho lokwenene! Emva koko, bangaphi abantu abadibeneyo kwiindawo ezinkulu zeWebhu yeWebhu yehlabathi-kwaye abaninzi babo banabantwana abakhulayo ...
Iimbalwa ezimbalwa malunga nendoda yokuhlambalaza
Isobho seentlanzi kunye ne-shrimps
Kunokuba baphathe umonakalo weminwe yezandla?